နီဇ် skyrunning ပွဲအတွက်ချထား DTC အသံလွှင့် Nano HD ကို RF - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » DTC အသံလွှင့် Nano HD ကို RF နီဇ် skyrunning ပွဲအတွက်ချထား
ဓာတ်ပုံ Credit: ဟိုဆေး Alvarez
DTC အသံလွှင့် Nano HD ကို RF နီဇ် skyrunning ပွဲအတွက်ချထား
Whiteley, Hampshire ပြည်နယ်ဗြိတိန်, 17 ဇွန်လ 2019: DTC အသံလွှင့် Nano HD က transmitter 13 ၏လွှမ်းခြုံများအတွက်အံ့မခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှတပ်ဖြန့်ခဲ့ကြth သည် L'Olla က de Núria, စပိန်နီဇ်တောင်ရိုး 8-9 ဇွန်လအပေါ်တစ်ဦးနှစ်ရက်ကြာ "skyrunning" အဖြစ်အပျက်။
Skyrunning ဟာယိမ်းယိုင် 2,000 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်ကျော်လွန်နှင့်တောင်တက်အခက်အခဲ II ကို°တန်းထက်မပိုပါဘူးဘယ်မှာ 30 မီတာအထက်ပြေးတောင်တစ်ခုအစွန်းရောက်အားကစားဖြစ်ပါတယ်။
21.5 ကီလိုမီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းသင်တန်းအရှည်နှင့်အတူ "ဟု The Olla" သာသောတောင်ပေါ်လမ်းကြောင်းအပေါ်အရပျကိုကြာပါတယ်။ 700 အပြေးသမားတွေထက်ပိုပြီးအဘို့, ပြိုင်ပွဲ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းကို 2700 မီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မှာသို့မဟုတ်အထက်အရပ်ဌာနကြာ - တစ် skyrunning ဖြစ်ရပ်ကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီ - အချို့ဝေမျှအတွက် 2913 မီတာသကဲ့သို့မြင့်မားဖို့တက်ပြီး။ အဆိုပါစုပေါင်းမြင့်အမြတ် 3880 မီတာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏ client ကိုများအတွက်ပြိုင်ပွဲကိုဖုံးလွှမ်းရန် DTC ရဲ့စပိန်မိတ်ဖက်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာထုတ်လွှင့် RF အထူးကု, Sobatech Group က enable လုပ်ဖို့, Sobatech ဗျူဟာမြောက်အသုံးချနှင့်သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံး key ကိုရာထူးမှာ DTC PRORXD RF အသံဖမ်းခြင်းနှင့်ချဲ့စက်များအပါအဝင်လေးယောက် DTC အသံလွှင့် Nano-based RF စနစ်များ, ထောက်ခံ ထောက်ပံ့ရန် HD ပုံတောင်တန်း၏ဝေးလံခေါင်ဖျားအစိတ်အပိုင်းကနေပါဝင်သူများ၏ပုံရိပ်များ။
Sobatech ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Jordi Nonell တူးမြောင်း engineer ၏အဆိုအရ "ဟု The Olla တစ်ဦးအဖြစ်ထင်ရှားစွာကာတာလဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ ပို. ပို. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေကိုထားပါတယ်။ သို့သျောလညျး, အွန်လိုင်း, ဒေသခံနှင့်ပြိုင်ပွဲအချို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝါသနာအိုးလွှမ်းခြုံများအတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးအားကောင်းတဲ့, သေးပေါ့ပါးခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
Sobatech အားဖြင့်တပ်ဖြန့်ကင်မရာကိုပြန်မှုစနစ် gimbal, transmitter ကို, PA, မိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်တနာရီကြာ + ဘက်ထရီတည်ငြိမ်, ကင်မရာအပါအဝင် 1kg ထက်လျော့နည်းချိန်တွယ်။
"ကျနော်တို့ကို dual ဒီကုဒ်ဒါတွေနဲ့နှစ်ခု PRORXDs တပ်ဆင်ရန်နှစ်နာရီအဘို့အကြမ်းတမ်းသောတောင်ပေါ်မြေပြင်အနေအထားကတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောပေါ်တွင်ဘက်ထရီအပါအဝင်ပစ္စည်းရှိသမျှတို့, ယူသွားပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ splitter စနစ်ဖြင့်လေးအင်တာနာ," Nonell ကဆိုသည်။ "ငါသည်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရတဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိရဟတ်ယာဉ်များရှိခဲ့သည်, ကိုထည့်သွင်းဖို့အလျင်အမြန်။ " ပြီးတာနဲ့ positioned, Sobatech ကင်မရာ-ပြန် Nano က transmitter ကနေ RF အချက်ပြမှုများ၏အပေါငျးတို့သ ယူ. ထပ်ဆင့်လွှင်အမှတ်သူတို့ကိုအပ်ပါကတစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦး downlink ထောက်ပံ့ပေးရာမှ HEVC အန်ကုဒ် / ဒီကုဒ်ဒါ။ PRORXD အသံဖမ်းတစ်ဦးအပိုဆောင်း pair တစုံပေါင်း SOLO H.264-တပ်ဆင်ထားပြီးကင်မရာတစ်ခုအရေအတွက်က start / finish ကိုလိုင်းများမှာ installed ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ခု Nano က transmitter ၏ပိုပြီးဝေးလံသောအဘို့, Sobatech လည်း DTC ရဲ့ SOLO7 တစ်စက္ကန့် Nano နှင့်အတူတစ် Ultra-သေးသေးလေး COFDM ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို transmitter ကိုပါဝါအသံချဲ့စက်တပ်ဖြန့် HD transmitter ကိုတစ်ဦး OB ဗန်အတွက် Dual-အင်တင်နာ DTC PRORX လက်ခံဖို့ downlink အဖြစ်သုံးစွဲဖို့တည်ရှိသည်။
အဆိုပါအသံလွှင့် Nano ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင့်မားတဲ့အဓိပ်ပါယျပုံရိပ်တွေ transmit လုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ transmitter ကိုအားကောင်းတဲ့, ထုတ်လွှင့်-စံ connectors ပါဝင်သည်; နှင့်သိသိသာသာတိုးတက်အပူစွမ်းဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအအေးရသည်။ ဤရွေ့ကားတိုးမြှင့်မှုများကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအရွယ်အစား, အအေးလိုအပ်ချက်နှင့်ဘက်ထရီ Run-အချိန်သတ်မှ transmitter ကိုတခြားပုံစံများမှဒေသများမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောထံမှ Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အဓိပ်ပါယျပုံရိပ်တွေကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတိုးချဲ့စစ်ဆင်ရေးကို enable ။
DTC အသံလွှင့်ဒုတိယသမ္မတ, အသံလွှင့်အရောင်း, JP Delport အဆိုပါ Olla တစ်လျှောက်လုံး Self-ဖူလုံရေးလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာအစနည်းပညာပိုင်းတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားစိန်ခေါ်မှုများနှစ်ယောက်စလုံး၏ညီတူညီမျှစစ်မှန်တဲ့များမှာ - ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - ထိုအသံလွှင့် Nano HD က transmitter ။ အကျိုးကိုကမ္ဘာ့အဆင့်မီပတ်ဝန်းကျင်၏အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူအံ့မခန်းလွှမ်းခြုံဖြစ်၏။ "
နယ်နိမိတ်ခြင်းမရှိဘဲအသံလွှင့် - DTC Domo အသံလွှင့်အကြောင်း
DTC အသံလွှင့် (Domo Tactical ဆက်သွယ်ရေး) ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ DTC နယ်နိမိတ်ခြင်းမရှိဘဲထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသူများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ကနည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထုတ်လွှင့်စျေးကွက်အတွက်ယင်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနည်းပညာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
တကမ္ဘာလုံးကြိုးမဲ့လင့်များ၏တစ်ဦးကကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့် MPEG4 ကြိုးမဲ့နည်းပညာတော်လှန်ရေးအတွင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, DTC, High-အရည်အသွေး, DVB-T ကအနိမ့်နှောင့်နှေးထုတ်လွှင့် transmitter ကို / လက်ခံစနစ်များနှင့်အထူးသအီလက်ထရောနစ်သတင်းစုရုံးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ IP ကိုဖြေရှင်းချက်ပြင်ပထုတ်လွှင့်ကမ်းလှမ်း ဂြိုဟ်တု newsgathering, မော်တာနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားလွှမ်းခြုံ, ခရီးဆောင်လယ်ပြင်စောင့်ကြည့်ရေးနှင့်ဗီဒီယို applications များကူညီ။
ultra-high တည်ဆောက်အရည်အသွေးနှင့်ကြမ်းတမ်းခြင်းမှ DTC ရဲ့ထုတ်လွှင့်အစုစုကိုအကြိုးကြေးဇူးမြားကဤစျေးကွက်လိုအပ်, စစ်တပ်နှင့်စောင့်ကြည့်ဈေးကွက်ထဲမှာ 50 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကထက် ပို. များကကျောထောက်နောက်ခံ။
Starfish သည်ဆွီဒင်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သို့လိုက်နာမှုမှတ်တမ်းကိုပေးသည် - အောက်တိုဘာလ 16, 2019
Intinor သည် Broadcast India 2019 ရှိ Direkt link ကိုပြသသည် - အောက်တိုဘာလ 11, 2019
Direkt link range ကို NAB Show New York 2019 တွင်ပြသမည် - အောက်တိုဘာလ 10, 2019
ချဲ့စက်များ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ COFDM Domo Tactical ဆက်သွယ်ရေး DTC DTC PRORX DTC PRORXD RF HD isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော nano HD ကို transmitter အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် PRORXD recievers RF Sobatech Group မှ SOLO H.264 SOLO7 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-06-17
ယခင်: Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade
နောက်တစ်ခု: EditShare အတူ Hood Inc ကို Productions အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၎င်း၏နယူးခေတ်သစ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး